Ngabe sekuphele iminyaka engama-25 kusukela la amanoveli ayi-7? Ushaye khona. Futhi siyazifunda noma cha? | Izincwadi Zamanje
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | inganekwane yesayensi, Fantasy, Amabhuku, I-Novela, Inoveli emnyama, Inoveli yezothando
1992 Bekungunyaka esikhumbula sonke ngenxa yemicimbi eyahlukahlukene. Uma ubheka emuva kwifayela le- umkhakha wezincwadi Ngithole ezimbalwa iziqu eziphawulekayo lokho kwakushicilelwa ngaleso sikhathi. Kuthiwani uma, Iminyaka engu-25 edlule ukuthi izibongo ezidume kabi zinjani UGordon, uHarris, uMurakami, uPrachett, uJennings, uMoccia no-Ellroy ushicilele lezi zincwadi. Ake sikhumbule.
1 UShaman - uNowa Gordon
2 Onkulunkulu Abancane - UTerry Prachett
3 Amamitha amathathu ngaphezulu kwesibhakabhaka - uFederico Moccia
4 Izwe - uRobert Harris
5 U-Falcon - uGary Jennings
6 Eningizimu yomngcele, entshonalanga yelanga - uHaruki Murakami
7 I-White Jazz - uJames Ellroy
Shaman - UNowa Gordon
UGordon uhlanganisa iminyaka engama-90 manje ngoNovemba futhi ungelinye lama- Abalobi bezindaba zomlando waseMelika abadume kakhulu. Mhlawumbe umsebenzi wakhe owaziwa kakhulu yilokhu trilogy inkanyezi umndeni wakwaCole phakathi namakhulu eminyaka. Isihloko sakhe sokuqala sasaziwa kakhulu Udokotela futhi le yingxenye yesibili eqhubeka eNtshonalanga YaseMelika futhi eyashicilelwa eminyakeni engama-25 edlule. Kuvaliwe UDkt Cole.
En Shaman udokotela URobert Jacobson Cole ubalekela izwe lakhe laseScotland nendodana yakhe ukuhlala emazweni amasha we América. Ngemuva kokusebenza eBoston, kanye nodokotela ohlinzayo odumile u-Oliver Colmes, uRobert nendodana yakhe bazoya kwabangaxilongiwe Oeste ukutadisha okungaziwa Amasiko Okwelapha AmaNdiya Sauk. Futhi kulolo hambo bazohlangana nothando, ukutholakala, impi nokuphila.
Onkulunkulu abancane - UTerry Prachett
El umphathi wezincwadi ezinhle wasishiya eminyakeni embalwa edlule. Ngakho-ke ungahlala umkhokhela intela ngokufunda eminye yemisebenzi yakhe. Lokhu kwashicilelwa eminyakeni engama-25 edlule futhi kuyi- inoveli yesibili ezimele evela endaweni yonke ye-Discworld (owokuqala ngu Ama-Pyromides). I-Prachett parody, ngokuthinta kakhulu isiNgisi, imiqondo efana la impi nezinkolo.
Amamitha amathathu ngaphezulu kwesibhakabhaka - UFederico Moccia
Inkosi yase-Italy engangabazeki ye- inoveli yothando yentsha iqale ukwehlela kulo hlobo lwalesi sihloko. Usitshele indaba ka Babi, okuyinto a imodeli umfundi nendodakazi ephelele. Ngakolunye uhlangothi, Isinyathelo sinodlame futhi sinamahloni. Bavela emazweni amabili ahluke ngokuphelele, kepha lokho ngeke kubavimbe thandanani ngaphezu kwayo yonke imihlangano. Kodwa-ke, futhi luthando oluyimpikiswano ukuthi kuzofanele balwele okungaphezu kwalokho ababekucabanga. Konke kwenzeka kufayela le- UMuzi Ongunaphakade, okungaba yisimo esingcono kakhulu salezi zanamuhla i-Romeo noJuliet.
Patria - URobert Harris
Lona uchrony Umbhali waseBrithani othengisa kakhulu manje uneminyaka engama-25 ubudala futhi uhlala emusha. Sikunyaka 1964 futhi a Umbuso Wesithathu Onqobayo ulungiselela ukugubha iminyaka engu-75 u-Adolf Hitler. Kodwa ke kuqhamuke isidumbu senqunu sendoda endala entanta echibini le Berlin. Lokhu kuvela ukuthi kube isikhulu esiphezulu seqembu, futhi okulandelayo ohlwini oluyimfihlo ukuthi isigwebo sentambo kubo bonke labo abalulwe kuyo. Futhi bebelokhu bewa ngokulandelana ku- u-conspiracy lokho sekuqalile.
IHalcón - UGary Jennings
Este Umbhali waseMelika wayengumbhali odumile we- inoveli yomlando ngeziqu eziphumelele njenge Ama-Aztec o Umhambi. Lokhu futhi bekuyi- futhi kuyi- kubalulekile yabo bonke abathandi balezo zincwadi ezinde kodwa ze ukufunda ngokushelelayo nangokuhehayo.
IHalcón isitshela i- izinkumbulo ezicatshangelwayo ze-protagonist, i-goth Thorn, ngubani one imvelo ethile, utshele ukuxhaphaza nokuzidela kwakhe ukuqalwa kocansi okungajwayelekile ezigodlweni ezimbili kuze kube a uhambo olungavamile kulo lonke elaseYurophu. Ekuqaleni enkampanini ye- I-Wyrd, induna yekhulu yaseRoma manje esengumzingeli nomzingeli futhi emfundisa ukuthi aphile emahlathini. Bese kuthi uThorn ahlangane futhi abe ngumngani I-Theodoric, inkosi yama-Ostrogoths, ezosebenza njenge jikelele kanye nosomaqhinga.
Eningizimu yomngcele, entshonalanga yelanga - UHaruki Murakami
Umbhali odumile waseJapan futhi ukulwela okuphakade kuNobel wezincwadi sitshele lapha esisodwa inganekwane yakudala yezothando elahlekile yabuye yazuza. I-Hajime uyindoda ejabule ngokwengeziwe, eshadile, ubaba wamantombazane amabili futhi ungumnikazi weqembu le-jazz, ngubani uhlangana kabusha noShimamoto, umngani kusuka ebuntwaneni nasebusheni owayengakaze ezwe futhi. Laba bobabili, njengoba bekuyizingane kuphela, bebehlanganyela izinto zokuzilibazisa nezimfihlo esikoleni. Manje, eminyakeni edlule, bakhangwa ngokungenathemba. Kodwa I-Hajime iyahlanya futhi kubonakala sengathi uzimisele ukumshiya yonke into.
I-jazz emhlophe - UJames Ellroy
El isihloko sokugcina yocingo I-Quartet yaseLos Angeles ngabona ukukhanya ngo-1992 ukuze aqedele uchungechunge oluyisisekelo ezindabeni zangempela zobugebengu. U-Mad Dog Ellroy igcina ingxenye yabalingiswa okuvele ngaphakathi I-LA Kuyimfihlo futhi-ke isikhathi nemvelo.
I-protagonist manje isiyi- ULieutenant David Klein okwabo ukushona, ukushaywa nokuphangwa kuyizingozi nje zomsebenzi. Kepha ekwindla ye 1958 amafidi avula iUkuphenya ngenkohlakalo yamaphoyisa futhi wonke amehlo, izinsolo, nezinsolo zibhekiswe kuKlein. Noma esize ukudala lelo zwe lokuhaha nokufuna ukuvelela, sizozama ukuphuma sisaphila ngaye nganoma iyiphi imali.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Ngabe sekuphele iminyaka engama-25 kusukela la amanoveli ayi-7? Ushaye khona. Futhi siyazifunda noma cha?
Imisebenzi engcono kakhulu kaStephen King